You are at:Home»Headline»မြို့တော်ဟားခါးတွင် ဒီဂရီကောလိပ် ထားရှိရေး ကော်မီတီဖွဲ့စည်း
ချင်းပြည်နယ်မြို့တော် ဟားခါးတွင် ဒီဂရီကောလိပ်ဖွင့်လှစ်ရေးကော်မီတီ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်နေ့က ဟားခါးမြို့တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြသည်။
ဟားခါးမြို့မိမြို့ဖ ၃၀ ဦးပါဝင်လျက် ဟားခါးမြို့ ဈေးသစ်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွင် တွေ့ဆုံပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့ စည်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Chairman – Pu Siang Mang
Vice Chairman – Rev. Dr. Hla Aung
Secretary – Pu Sui Thio
Assistant Sect. – Pu Jacob Thang
Treasurer – Pu Ral Kham
Assistant Treasurer- Pi Van Thla Cer Hniang
Chungtel: – Rev. Dr. H. Siang Kung
– Rev. Dr. Lal Uk
– Pu Lal Kung
– Rev. David Shwe
– Pu Rual Cung
– Pu Thawng Vung
– Dr. Hmuh Thang
– Rev. Paul Tum Ceu
– Rev. M. Thawng Kam
– Rev. Joel Nawl Cung Lian
– Pu Ngun Hram
– Rev. Dr. S. Ngun Ling
– Pu Sui Hingz
– Pu Ceu Hlei Lian
– Rev. Thawng Hmung
” ကော်မီတီကို ပြည်တွင်းမှာသာ မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံတကာရောက် ချင်းလူမျိုးများအထိ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမှာပါ ” ဟု ကော်မီတီဝင်တဦးက ပြောသည်။
တိုင်းရင်သားလူမျိုးပေါင်းစုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ၁၄ ခု အနက် ချင်းပြည်နယ်သည် ဒီဂရီကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ် မရှိသေးသည့် အဆင်းရဲဆုံးဒေသဖြစ်သည်။
ယခင် တပ်မတော်အစိုးရက ချင်းပြည်နယ်ဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ် ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်၊ ကလေး – ၉ မိုင်တွင် ခိုင်ကမ်း ကော လိပ်ဆိုပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့တွင် အဆိုပါ ကလေး တက္ကသိုလ် ( ယခင် ခိုင်ကမ်းကောလိပ်) သည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး တွင် ထည့်သွင်းခြင်းခံရသည်။
ယခင် မဆလ အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက စပြီးလက်ရှိ အစိုးရသစ်လက်ထက်အထိ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ တာဝန်ရှိများသည် ချင်း ပြည်နယ်တွင် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် ကျောင်းထားရှိပေးရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြသော်လည်း နေရာဒေသ ရွေးချယ်မှုနှင့် ပါတ်သက်ပြီး သ ဘောထားကွဲလွဲနေကြသည်။
ချင်းကျောင်းသားလူငယ်များသည် တက္ကသိုလ်ပညာကို အဓိကအားဖြင့် ချင်းပြည်နယ်ပြင်ပ စစ်တွေ၊ ကလေး၊ ပခုက္ကူ၊ မုံရွာ တို့တွင် တက်ရောက်နေကြသည်။